Video Free Player (Windows 8 taageeray) waa ciyaaryahan video free iyo iminka in qalabaysan qaababka badan oo horumarsan. Waxaa ciyaara wax ku dhowaad file maqal ah ama video aad tuuraayo ee aan wax codecs rakibay. Iyadoo design nadiif ah oo qadarin, aad damaanad qaaday qaab warbaahinta-fiican-fasalka. Free video download ciyaaryahan inay ku raaxaystaan ​​waayo-aragnimo ah oo degdeg ah iyo effortless hadda.
Waxaan jeclahay oo dhan filimada. DVD ciyaaryahan software kaa siin doonaa ku saabsan waayo-aragnimo ah te'atradii. Codsiyada DVD ciyaaryahan Modern dareemi hagaajiyo feature audio iyo video ah. Waxaad ku raaxaysan filimada hab cusub u DVD ee muuqaalada dabacsan. Barnaamijka DVD Maanta ayaa kaamil ah u daran, midabka dabiiciga ah iyo la barbardhigo fursadaha taas oo keeni goobaha humaagga ama aadka u iftiimiyey. DVD ciyaaryahan software aad kombuutarka dhigeysa madadaalada tayo tiyaatarka ee farahaaga.
Top 10 Players DVD Bilaashka ah ee Windows iyo Mac Users
Waxaa e codsiyada badan ee suuqa oo DVD ciyaari karaa dhammaan, laakiin ka xariiqday in WinDVD Media Center sida tusaale ahaan Suite kale isku dhafan oo kale ah waa wax aan doonayo in kombiyuutarada ama telefoonada gacanta. Waxaan Dhab ahaan ma doonayo in aan tago ugaadhsiga wareega wax ay u gudato xilalka ku salaysayn khalkhalgelinta warbaahinta aasaasiga ah kaliya marka aan u baahan tahay ugu. Qaabab Hot sida H264 iyo VCL waa aad loo wada doonayo hadda oo u wanaagsanaan doonaan iyo in ay leeyihiin software sida InterVideo ee wax soo saarka kale. WinDVD 8 Gold in la siiyo taageero video loo maqli karo caymiska.
Qaar ka mid ah muuqaalada WinDVD Media Center:
DVD loo maqli Automatic
Qaado Snapshots ah
Central Library Media
Si fudud Short Videos
Waxaa la dhisay ee Picture siladda
Dhegayso MP3 Player
Waad dooxi doontaa CD-aad
Guba Data Files
2. ciyaaryahan warbaahinta VLC
Sida GOM Player, VLC Media Player uu yar yahay, si dhakhso ah, oo lacag la'aan ah, oo bixiya ciyaaryahan sahlan oo kale ah video taasi socon baxay sanduuqa leh tiro balaadhan oo ah qaabab video. Si ka duwan GOM Player, si kastaba ha ahaatee, VLC Media Player sidoo kale loo isticmaali karaa kala duwan ee internetka video durdurro, sidaas darteed waa duwan oo laysku halayn karo in QuickTime iyo xal kale oo u dhaqmaan sidii hore dhamaado si videos aad qulquli halkii download.
3. DVD Data hadhin
DVD-u Khushuucsan Data hadhin Version 5.1 2013-2014
In DVD-hadhin Data hadhin waxaad ka heli doontaa lix xal kala duwan software in mid ka mid ah! Software kala duwan yihiin DVD sii yaraanaa copier DVD, DVD gubi, Video Converter, Blu DVD ray Converter & YouTube video downloader.
Idiinkala hadhin DVD-hadhin Data uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada laga cabsado,
Change DVD Gobolka Codes, hadhin cayn kasta DVD, Copy Gadzhiyev oo cayn kasta DVD, Taageer DVD lakabka Dual, Support Multi Session DVD, feature Dib-u-qoraalka, la dhisay DVD Player, Guba DVD toos ah, la abuuro Images ISO oo Falanqeynta tayo sare leh.
Waxa kale oo uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada dheeraad ah: kaabta DVD kasta oo Si fudud, la dhisay Video Converter, Save ISO image galay DVD kasta oo bannaan.
Marka aad u baahan tahay CD iyo DVD abuurka ypu isticmaali kartaa Ulead DVD MovieFactory. Waxay noqon kartaa sawiro iyo videos aad galay DVD filimada tayo sare leh. Waxa kale oo aad gubi kartid macluumaadka iyo music inay CD ama DVD hab degdeg ah. Waa sahlan, sababtoo ah waxaa aalada Wizard ee.
Waxaad isticmaali kartaa wax kasta video ka kaamirada. Waxaad kaloo isticmaali kartaa cajaladaha VHS, rikoorrada DVD, programsfiles TV iwm internetka. Waxaa loo isticmaali karaa Photos loogu duubey. DVD cajalladaha la keeno doono iyo edit diiwaan waxaa la. Oo waxaad iyaga u ciyaari karaa ku dhowaad ciyaaryahan kasta DVD.
Waxaad gubi karaa video digital, filimada VHS ama barnaamijyada TV in talaabooyin dhawr ah. Waxaad aan loo baahnayn doonaa meel drive adag oo dheeraad ah.
Waa ciyaaryahan xor ah warbaahinta u Linux iyo Windows.It ayaa codecs dhisay-in, taas oo macnaheedu yahay, waxa ay ka ciyaari karaan dhammaan video maqal iyo qaabab. Kasta oo codecs dibadda oo aan loo baahnayn. Waxaad si fudud ku rakiban kartaa SMPlayer. Ka dib markii in aad yeelan doontaa in ay ciyaari qaabab oo dhan. SMPlayer xusuusan karaa goobaha oo dhan files aad ciyaaray. SMPlayer waa MPlayer ciyaareed guulo ah oo ay interface garaafyada user (gui). Sidaas darteed waa ka ciyaari kara video ku dhowaad dhammaan yaqaan iyo qaabab audio.
DAPlayer waa ciyaaryahan video free macaan oo awood leh. Waxay la shaqeeyaan boqolaal qaabab. Waxay leedahay video tayada qeexitaanka sare. DAPlayer ayaa si qarsoodi ah ugu weyni waa in ay timaado in ka badan 300 oo audio iyo video codecs la DVDs iyo Blu-rays.
Sidoo kale ciyaaryahanka music aad u isticmaali kartaa filimada aad jeceshahay iyo bandhigyada TV.
Waxay leedahay badan oo xul ah u qaabeynta kuwaas oo ka mid ah ee video, audio, subtitles iwm Waxay leedahay kooxda xun ayaa sidoo kale. Haraggeeda waa mugdi. Mararka qaarkood dhirta menu ka dhigaysa yara adag.
Zoom Player waa u PC Windows ah. Waa xaragada badan, customizable oo ugu debecsan. Waxay leedahay qaab weyn laakiin kaaftoomi lacag la'aan ah. Waxay bixisaa nidaamka Shan-Key kaas oo kor u yahay, hoos, bidix, midig iyo dooro. Waxay leedahay interfaces badan oo horay sida Browser File, Media Library, kontoroolha Color, playlist Editor, Bookmarks, Audio barbaraha, Play Taariikhda iyo in ka badan. Haddii qof uu leeyahay wax yar ama aan lahayn waayo-aragnimo computer, qaababka xog ay ku fiican iyaga u. Waxaad loo rogi karaa PC wax galay Home Entertainment Center dhakhso leh Zoom Player.
Ugu Nero 2014 version cusub premium waxaa ay leeyihiin afar qaababka ugu muhiimsan. Mid ka mid ah waa kuwo liita TV, mid kalena waa disk in ay diinta ka qalab, mid saddexaad waa taageero HD tafatirka Ultra oo la soo dhaafay ugu fiican ee mid ka mid ah waxaa lagu hagaajin taageero qalab mobile. By version premium waxa aad qori kartaa CD, DVD iyo Blue-ray. Dhammaan codsiyada la heli karo ayaa soo bandhigeysa ee Windows 8-style guddi. Waxay leedahay farqi yar ka Nero Gubidda ROM. Its codsiyada waxaa loo kala qaybiyay afar qaybood oo waaweyn. 1. Maamul iyo Play 2. Edit iyo Beddelaan 3. Rip iyo Guba 4. kaabta iyo Samatabbixinta.
FreeSmith Video Player waa ciyaaryahan DVD oo lacag la'aan ah. Waxa ay u muuqataa fiican iyo interface waa Begovic. Waxay leedahay ma on gacanta ku screen laakiin hab shaashad buuxda u muuqataa wanaagsan. Waxay qaadataa meel yar oo aad pc sababtoo ah FreeSmith free video ciyaaryahan waa 8MB kaliya. Waxay leedahay basaas lahayn, xayeysiis lahayn iyo opencandy lahayn.
FreeSmith Video Player la habsami ciyaari karo video, DVD, Blu-ray iyo music. Waxaa taageeri karaan dhammaan noocyada audio iyo video qaabab. Halkan leeyihiin fursadaha in ay doortaan Cinwaan, horyaalka, audio iyo cutubka in ay ku raaxeystaan. Uma baahnid in aad rakibi dheeraad ah Video codec. Waxa kale oo aad qaadan kartaa screen shot ay shaqo qabashada shaashadda.
PowerDVD waa qaabab ugu dambeeyey warbaahinta, smart cross-madal transcoding warbaahinta iyo ka badan oo la teknoolajiyada TrueTheater. PowerDVD leeyahay saddex dabeecadood oo laga cabsado oo loo guulaystay Abaal-marinta ciyaaryahanka software Blu-Ray, barnaamijyada moobiilllada iyo adeegyada daruur in la siiyo deegaanka ah madadaalo aan xuduud lahayn. Waad ku istareexi kartaa content warbaahinta jecel oo dhan mar walba iyo meel walba.
Waxaa hadda taageertaa brand cusub ee soo socda-gen sare qaab video HEVC / H.265 ah. Movies Download HD waa ka dhaqso badan aad hadda sameeyo. Waa adag qiimihiisu sano ah ee filimada galay aad khafiif Ultrabook.
Maxaad Dooro Free Video Player
Waayo-aragnimo loo maqli -Excellent u DVD iyo HD movies
Ka sokow taageeraya 100 video oo caan ah iyo qaabab audio, ciyaaryahanka video free (Windows 8 taageeray) ayaa sidoo kale aad u saamaxaaya in ay ciyaari DVD kasta oo ku saabsan qalab kasta oo darawal DVD-gobol iyada oo gacanta ku navigation DVD buuxa. Thanks to ay ba'an X technology cusub, waxa ay qaadataa waqti yar u ciyaaro a HD video 1080P / 1080i, sida M2TS, wmv, MOV, AVC HD, MPEG, MKV, mod. iyo ciyaaro qiimaha processor aad u yar yahay ,. Deinterlacing waxa kale oo sahlay in ay ku raaxaystaan ​​videos fiidiyo qeexitaanka sare.
Raaxo warbaahinta -Simplified la design qadarin
Features lagu tarjumo design fudud, wax walba waa uu watay. Screen Full, hab mini, Weeraryahanka, dib u socon, dedejiyaan, hoos, dib u bilaabi loo maqli karo, computer xiritaanka ka dib markii loo maqli karo, iyo in ka badan waxaa laga heli karaa mid ka mid click, ama taageero hotkey dhamaystiran.
Ururka sawir -Intelligent ah goobaha aad ugu jeceshahay
Marka previewing faylasha video, waxaad lacag la'aan ah karo qaadan snapshots in mid ka mid click oo u badbaadin doonaa sida qaab BMP, jpeg. In ka badan in, xitaa waxay bixisaa toogashada iyo tolo feature sawir-qarxaya si ay u abuuraan album sawir cajiib diyaar u ah inay la wadaagto.
- OS taageerayaan: Windows NT4 / 2000/2003 / XP / Vista / 7 iyo Windows 8
- Processor: > 750MHz Intel ama AMD processor
- Free Hard Disk Space: 100 MB ama ka badan
- RAM: 256 MB ama ka sare
> Resource > Free > Top Toban Free Video Players inay Play Video, Audio si xor ah